यो एक व्यक्ति एक psychopath छ कि छैन भनेर निश्चय संग निर्धारण गर्न अत्यन्तै गाह्रो छ। तर, उहाँले अझै पनि सान्दर्भिक मुद्दाहरू छ संकेत केही व्यवहार हो। एक psychopath, परिभाषा द्वारा - समस्या अन्य भावना छ किन बुझ्न भएको छ जसले एक व्यक्ति छ, र सहानुभूति को यो कमी केही विवरण देख्न सकिन्छ - यस्तो व्यक्ति पिउन रुचि के छ। यस लेखमा व्यवहार तीन प्रकारका एक व्यक्ति psychopathy गर्न खतरा छ भनेर संकेत गर्छ सक्छ वर्णन गर्नेछ। रोचक तथ्य: मानिसहरू महिलाहरु भन्दा psychopathy थप खतरा हो। अब तपाईं यो थाहा छ कि, तपाईंले आफ्नो वरपर मा कसैलाई psychopath हुन सक्छ कि शक यदि तपाईं ध्यान गर्नुपर्छ जो तीन कुराहरू सिक्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्य मानिसहरूलाई हाई गर्नु तिनीहरूले असंवेदनशील छन्
एक अध्ययन मा, शोधकर्ताओं कार्य 135 विद्यार्थी दिनुभयो: psychopathy आफ्नो झुकाव प्रकट गर्ने थियो जो एक प्रश्नावली, पूरा गर्नको लागि। कि पछि सहभागीहरू अनियमित क्रममा तीन भिडियो हेर्नका लागि दिइएको थियो। तेस्रो हाँसेको, र - - एक yawning तिनीहरूलाई को एक तटस्थ अनुहार अभिव्यक्ति एउटा मानिस, अन्य थियो। र सहभागीहरू भिडियो हेर्नुभयो गर्दा, शोधकर्ताओं ध्यान आफ्नो अनुहार, को अनुहार मांसपेशीमा कुनै पनि गतिविधि नोटिस गर्न प्रयास हेर्नुभयो।
अध्ययन को परिणाम केहि धेरै रोचक देखाए: को प्रश्नावली psychopathic पूरा सबैभन्दा बलमा जो गोल ती सहभागीहरू पनि यस्तै विशेषता थियो - कहिलेकाहीं पनि वैमनस्यता स्पष्ट स्वभाव संग, भावनात्मक दूरी भइरहेको छ के बाट। र यी मानिसहरू कम्तिमा मानक मानव yawning प्रतिक्रिया संभावना थिए। प्रायजसो मानिसहरूले तिनीहरूलाई yawns अर्को कसैले देख्न जब तिनीहरूले पनि हाई गर्नु आकर्षित थिए। psychopathy झुकाउ भएका मान्छे, पूर्ण द्वारा मानिस yawning अन्य सहभागीहरू भिडियो कारण कुनै पनि प्रोत्साहन बेवास्ता गरे।
psychopaths के हुन्?
शोधकर्ताओं ध्यान दिनुहोस् कि अक्सर psychopathic गुण भएका मान्छे, सच्चाइ नभएको स्वार्थी, घमण्डी र असंवेदनशील। प्रतिक्रिया (वा बरु, प्रतिक्रिया को कमी) को yawning मानिस संग भिडियो psychopathic गुण समानुभूति को कमी को सबैभन्दा उल्लेखनीय उदाहरणहरू मध्ये एक छ, तर यो एउटा ठूलो र जटिल मोशाको को केवल एक तत्त्व हो। के तपाईं थाहा कसैले "heartless" छ कसरी हेर्न इच्छुक छन् भने, वा तपाईं नजिक कसैलाई psychopath हुन सक्छ कि शक भने, तपाईं बस तिनीहरूलाई छेउमा हाई गर्नु सक्नुहुन्छ। वा त्यहाँ अर्को तरिका हो: तपाईं सामाजिक सञ्जाल "इन्स्टाग्राम" आफ्नो खाता हेर्न र तपाईं त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ Selfie संख्या गणना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं psychopathic व्यवहार को परिभाषा मा अर्को वस्तु जाने सक्नुहुन्छ।
तिनीहरूले धेरै Selfie के
psychopaths को yawning प्रतिक्रिया गर्न सक्षम छन् भन्ने तथ्यलाई बाहेक, शोधकर्ताओं पनि अक्सर धेरै Selfie छ पोस्ट भनेर उल्लेख गरे। यस्तो कार्यहरू - सार्वजनिक गर्न संकेत एक प्रकारको - यो व्यक्तित्व विकार को एक चिन्ह, र expulsion Selfie छ। एक अध्ययन मा, शोधकर्ताओं मानिसको व्यक्तित्व लक्षण र यी मानिसहरू सामाजिक सञ्जाल आफूलाई प्रस्तुत कसरी सम्बन्ध जांच। 800 मान्छे को एक अध्ययन मा विभिन्न nationalities मानिसहरूलाई प्रतिनिधित्व थियो संग, 18 40 वर्ष देखि उमेर संलग्न थिए। उद्देश्य कारण narcissism, Machiavellianism र psychopathy गर्न Selfie गरिरहेको को बानी अध्ययन थियो। यी तीन सुविधाहरू सामूहिक को "गाढा triad" को रूपमा परिचित छन्, र तिनीहरूले व्यक्तित्व को आधुनिक मनोविज्ञान को ध्यान भयो।
को psychopaths गर्न प्रश्नहरू
वैज्ञानिकहरु तिनीहरू तिनीहरूले मानिसहरू र यति मा परिमार्जन गर्न एक झुकाव कि तिनीहरूले, नैतिकता संग चिन्तित हुनुहुन्छ जहाँसम्म, अरूलाई तिनीहरूलाई ध्यान गर्न चाहनुहुन्छ कति महसुस कसरी आकर्षक बारेमा सोधेर मान्छे को व्यक्तित्व केन्द्रित। साथै, सहभागीहरू तिनीहरूले तस्वीर उपवास बसिसक्नुभएकोले तपाईं एक सामाजिक सञ्जाल मा पोस्ट गर्नु अघि तिनीहरूले सम्पादन कति कति सहित सामाजिक सञ्जाल साइटहरू, प्रयोग तिनीहरूले कति सोधियो।
अध्ययन उच्च स्तर samoobektivatsii मानिसहरूलाई (कि छ, नजर लागि आफूलाई विशेष मोल गर्नेहरूलाई) र narcissism सामाजिक सञ्जाल धेरै समय खर्च भनेर फेला परेन। वैज्ञानिकहरु पनि narcissism र psychopathy झुकाउ भएका मान्छे, प्राय Selfie acrobystitis कि फेला परेन। यसबाहेक, जसले उच्च स्तर देखाए ती samoobektivatsii र narcissism तथ्यलाई धेरै बलियो सम्पादन सामाजिक सञ्जाल तिनीहरूलाई पोस्ट गर्नु अघि आफ्नो फोटो गर्न सबैभन्दा खतरा हो। यी सबै सुविधाहरू subclinical छन् कि टिप्पण लायक छ, मानिसहरूलाई आफ्नो उपस्थिति पूर्ण मानसिक बिरामी र जोखिममा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य छ होइन IE।
तिनीहरूले कालो कफी अर्डर
यो वस्तु सजिलै बस डेयरी उत्पादन र चीनी को खपत कम गर्न चाहने व्यक्ति गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ। एक अध्ययन तपाईं कुनै पनि additives बिना कालो कफी पिउन रुचि भने, तपाईं psychopathy थप खतरा हुनेछ फेला परेन। अध्ययन स्वयंसेवकहरु हजारौं को सहभागिता साथ सञ्चालन भएको थियो, र परिणाम देखाए कि जो यस्तो narcissism, Machiavellianism र psychopathy छ कि कालो कफी, को "गाढा triad" थप इच्छुक, साथै गर्न दैनिक sadism रूपमा तीतो खानेकुरा र पेय पदार्थ रुचि मान्छे। समावेश अध्ययन मा प्रयोग गरिन्छ जो तीतो खाद्य पदार्थ, सूची मुला, अजवाइन र टनिक।
इग्रोमनिया - एक कमजोर व्यक्तित्व को एक रोग
Trypophobia - यो के हो? यसलाई कसरी उत्पन्न गर्छ?
चिकित्सा र Cybernetic केन्द्र सतुर
खेल उपकरण: बास्केटबल
सर्गेई बोडोव: उद्धरण, जीवन, मृत्यु
स्कूल बारेमा सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी युवा कमेडी
पम्पिंग बिना अस्थिर सेप्टिक ट्यांक: सञ्चालनको सिद्धान्त
सांप्रदायिक सेवाहरु को लागि मास्को मुक्त यात्रा मा पेंशनरों, subsidized चिकित्सा हेरविचार, लाभ गर्न लाभ
SYD बैरेट: गुलाबी फ्लोइड को संस्थापक को एक संक्षिप्त जीवनी